सप्तरीमा एक जना १ सय ११ वर्षीय व्यक्ति भेटिएका छन् । जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउपालिका २ मा बिस. १९६४ सालमा जन्मिएका नेपाली नागरिक हुन् झवर मियाँ ।
उनले भर्खरै २०७४ कार्तिक २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । जन्मसिद्द नागरिकता प्राप्त गरेका उनको नागरिकता नं. ८०९५२७७४ हो ।
उमेरको प्रभावले शरीर चाउरी पर्न थालेको मियाँको अनुहार खुम्चिदै कपाल पनि फुल्न थालेको छ । उनले वंश चलाउन छोरा पाउने आशमा ५ वटा विहे समेत गरेका छन् । सवै श्रीमतिको निधन पनि भईसक्यो तर, पनि छोरा पाउने उनको लालसा भने पुरा हुन सकेन ।
छोरा नजन्मिए पनि अव उमेरले साथ नदिदा वाँकी जीवन छोरी, एक दर्जन वढी नाति नतिनी र इष्टमित्र कै साथ र सहयोग लिएर विताउने उनको इच्छा छ ।
हाल उनी राजविराज ४ स्थित नुरीजामा मस्जिदमा आश्रय लिई जिवन बिताइरहेका छन् । बिस. १९९९ मा पहिलो विवाह गरेका उनले पहिलो श्रीमतिबाट छोरा नजन्मिए पछि वंश हांक्ने उत्तराधिकारीको आशमा एक पछि अर्को गर्दै ५ वटा श्रीमति भित्रयाए । तर, कसैबाट छोरा जन्मिएन । उनको हसिना, वेचनी र सकिला खातुन गरी ३ वटा छोरी मात्र छन । सवै छोरीको विहे पछि जन्मिएका १४ वटा नाती नतिनी सगैं रमाउदै उनको जीवन र दिनचर्या अघि वढेको छ ।
उनी दैनिक नमाज र प्रार्थना सगैं वचेको केही समय मदरसाका वालवालिकालाई पनि पढाएर विताउने गरेका छन । नाति नातिनी सँग खेल्दै रमाउँदै बँचेको समयमा उनी नुरी जामामस्जिदका मौलाना इमाम साहेवसगैं मिलेर मुस्लिम समुदायका वालवालिकालाई पढाउने गरेका छन् ।
उनको खानपान र अन्य आवश्यकताको पुर्ती सवैको जोहो नुरी जामा मस्जिद मदरसा व्यवस्थापन समितिले नै मिलाइ दिएको मौलाना इमाम साहेवले वताए । वुढ्यौली उमेरमा उनी साइकल चलाउदै विभिन्न कार्यक्रम र समारोहमा समेत सहभागि हुने गरेका छन् । यति उमेर पुगी सक्दा पनि शारीरीक व्यायाम र उचित खानपानका कारण कुनै रोगले छुन सकेको छैन् । उमेर र शारीरीक अवस्थालाई ध्यानमा राखी लामो दुरीमा भने वस र अन्य सवारी साधनको प्रयोग गर्ने गरेको उनले वताए ।
यता जीवनको उतरार्ध तथा वुढ्यौली उमेरमा पनि उनले देखाएको सकृयताको कदर र सम्मान गर्दै उनलाइ मदर फाउण्डेशन नामक संस्थाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मान गरेको छ । समाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल मदर फाउण्डेशनका प्रमुख समेत रहेका जनकपुर राजविराज उच्च अदालतका न्यायधिश सल्लाउदिन सिदिकीले झवरले यो उमेरमा पनि देखाएको सकृयता र वालवालिकालाई दिइरहेको शिक्षाको कदर गर्दै सम्मान गरिएको वताए ।
यस्तै ज्येष्ठ नागरिक प्रति घर, समाज तथा राष्ट्रबाटै सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्ने मुस्लिम समाजका केन्द्रीय सचिव एवं समाजसेवी मो. हासिम अन्सारीको सुझाव छ ।